Sidee Loo Dejiyaa Xulashada Mawduucyada Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo qaabeeyaa dookhyada waxyaabaha ku jira Twitter?
Waxaa laga yaabaa 11, 2021 0 comments 420
Dhaqdhaqaaqa ay ku shaqeyso Twitter dartiis, qulqulka macluumaadka gaadha barxadda ayaa sii kordhaya. Boqollaal kun oo Tweets ayaa la abuuraa waqti kasta oo la siiyo. Xaqiiqdii, waxaa lagu qiyaasay in 500 milyan oo Tweets maalin kasta lagu daabaco adduunka oo dhan iyadoo kumanaan mowduucyo kala duwan leh.
Marka waxaa lagaa qaadayaa macluumaad aad u tiro badan. Twitter wuxuu ka fikiray suurtagalnimada in isticmaaleyaashu aysan la kulmin soo bandhigid xad dhaaf ah oo aan u dhigmin dantooda, sidaas darteed nidaamku wuxuu go'aamiyaa xayeysiisyada uu tuso, sidaas darteedna ma dareemayaan inay ka dheregsan yihiin macluumaad laga yaabo inaysan xiiseyneynin.
Sidoo kale, in kasta oo ay xaqiiqda tahay in isla nidaamka uu go'aaminayo danaha iyo mowduucyada ku habboon ee astaantaada u gaarka ah sida ku xusan waxqabadkaaga barxadda iyo sidoo kale arrimo kale, waad u qaabeyn kartaa sidaad u jeceshahay qaabeynta boggaaga. Raac dardargelinta hoose si aad u barato sida loo sameeyo.
Maxaad ku gaadhaysaa inaad shaqsiyeysiiso waxyaabahaaga?
Adoo ku habeeynaya waxyaabahaaga gaarka ah waxaad abuuri kartaa taariikh aad u xiiso badan oo dhaqso badan uguna fudud Tweets, xiriiriyeyaasha, wada sheekaysiga, maaddooyinka maaddooyinka badan leh iyo mawduucyada laga yaabo inaad xiiseyneyso
Sidoo kale, markii aad iyaga u habaynayso, Twitter ayaa ku tusi doona Tweets-ka ugu muhiimsan, xayeysiisyo kafiican iyo talo soo jeedin fiican oo ku saabsan cidda aad jeclaan laheyd inaad raacdo.
Dejinta waxyaabaha aad aragto
Soo gal koontadaada Twitter adoo adeegsanaya qalab kasta, PC ama App.
Ka hel qaybta qaabeynta qaab-dhismeedka dhinaca sheekadaada. Tani waxay ku yaalliin adigoo riixaya "xulashooyin dheeri ah" oo ku jira shebekadda dhexdeeda, halka, App-ka, aad uga heli karto sawirkaaga bogga
Qeybtaan waa inaad heshaa "asturnaanta iyo amniga". Markaad gasho waxaad awoodi doontaa inaad hesho "waxyaabaha aad aragto". Markaad soo gasho waxaad arki doontaa qaybta oo dhan oo loogu talagalay inay go'aan ka gaarto waxa laga arki karo Twitter iyadoo la raacayo mowduucyada iyo danaha aad doorbideyso.
Xulashada koowaad ayaa ah "Muuji waxyaabo badan oo warbaahin ah oo laga yaabo inay ku jiraan waxyaabo xasaasi ah", kaas oo aad ugu hawlgelin doontid adigoo isticmaalaya sanduuq.
Xulashada labaad waxay u dhigantaa "mowduuc". Kuwani waxay u adeegaan inay shakhsiyeeyaan Tweets-kaaga, iyo sidoo kale dhacdooyinka iyo ogeysiisyada aad ku aragto waqtigaaga. Dhexgalka waxaad ku arki doontaa mowduucyada la soo jeediyey, oo aad si fudud u tirtiri karto. Qeybta hoose waxaad ku geli kartaa "mowduucyo badan" si aad ugu darto wax badan oo iyaga ka mid ah.
Danaha waxaad ka heli kartaa liis iyaga ka mid ah, oo nidaamku go'aamiyay oo u dhigma astaantaada, kuna saleysan Tweets aad daabacdo, waxqabadkaaga, iyo sidoo kale mowduucyadaada. Waad ku mahadsantahay xiisahaas, Twitter ayaa kuu habeyn kara xayeysiisyada ay ku tusayso. Xullo ama tirtir kuwa aad jeceshahay.
Markaad daaqeyso, xulo xulashooyinka si aad u muujiso natiijooyinka ku saleysan Tweets iyo isbeddellada ku saleysan goobtaada juqraafi.
Ugu dambeyntii, "goobaha raadinta", go'aanso haddii aad rabto inaad qariso waxyaabaha ku saabsan saamaynta xasaasiyadda dadka qaarkood. Waxaad sidoo kale "ka saari kartaa koontooyinka la xiray iyo kuwa la aamusiyay", xitaa haddii aysan ka muuqan natiijooyinka raadinta.
1 Maxaad ku gaadhaysaa inaad shaqsiyeysiiso waxyaabahaaga?
1.1 Dejinta waxyaabaha aad aragto
Instagram, Sidee loo baddelaa heesaha Instagram-ka?
Sidee loo beddelaa daqiiqadaha Twitter?